गुणस्तरीय शिक्षाको यात्रामा ख्वप - Online Majdoor
भक्तपुर नगरपालिकाका तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूको २०५६ साल असार ३१ गते बसेको बोर्ड बैठकबाट निर्णय भई २०५६ साल साउन १६ गतेबाट ख्वप माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन भएको थियो । भक्तपुर जिल्लाको शैक्षिक जागरणको अगुवाइ गर्दै ‘एक घर एक स्नातक’ को अभियानलाई टेवा पु¥याउन स्थापना भएको यस विद्यालयको २१ वर्ष पूरा गरी २२ औँ वर्षमा लम्किरहेको छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालित यस विद्यालयले शैक्षिक संस्थाहरू अब्बल र सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाबाट भौतिक पूर्वाधार (जस्तै जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, फर्निचरलगायत) निर्माण तथा स्थापना गरी आवश्यक सञ्चालन खर्च विद्यार्थीहरूबाट उठाइने शुल्कले धान्ने गरी यो विद्यालय अगाडि बढिरहेको छ । वि.सं २०६५ सालबाट यस विद्यालय पूर्णतया विद्यार्थीहरूबाट उठेको शुल्कमा निर्भर रही सञ्चालन हुँदै आएको छ । यस विद्यालयमा पूर्णकालीन शिक्षक ३८ जना अर्धपूर्णकालीन ३, मासिक वेतनमा १०३ शिक्षक र प्रशासनिक कर्मचारी ४० गरी जम्मा १८४ जना कार्यरत छन् ।
यस शैक्षिक वर्षको भर्नासमेत गरी हाल कक्षा ११ र १२ मा ६८ जिल्लाका ३ हजार २४५ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । जसमध्ये, व्यवस्थापनमा १ हजार ४२४ जना, विज्ञानमा १ हजार २७५ जना, मानविकीमा १९७ जना र कानुनमा ९२ जना विद्यार्थीहरू बिहानी र दिवा सत्रका ७० वटा सेक्सनहरूमा अध्ययनरत छन् ।
तुलनात्मकरूपमा कम र सस्तो शुल्कमा निम्न आय भएका अभिभावकका छोराछोरीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने स्थापनाकालदेखिको उद्देश्यमा हामी अटल छौँ । विद्यार्थीहरूलाई देश र जनताप्रति बफादार बनाउन, मिहेनती, इमानदार र नैतिकवान बनाउन, परीक्षामा नक्कल गरी उत्तीर्ण हुनुभन्दा अनुत्तीर्ण हुनु र पुनः मिहेनत गरी उत्तीर्ण हुनु धेरै उत्तम भन्ने ज्ञान दिलाउन शिक्षक–अभिभावकको सामूहिक प्रयासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैअनुरूप हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ ।
विद्यार्थी र अभिभावकहरूको निरन्तर रोजाइमा यस विद्यालय पर्नुले हामीहरूलाई हौसला प्रदान गरिरहेको छ । व्यवस्थापनका पाटोहरू जस्तै कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, यातायात आदिलाई पनि क्रमिकरूपमा सबल र सक्षम बनाउँदै लगेका छौँ ।
कक्षा कोठा अभावलाई मध्यनजर गरी बास्केटबल कोर्टको दक्षिणतर्फ ५१५५.१४ वर्ग फिट अर्थात् १५ आना १ पैसा जग्गामा कुल १६ करोड ३६ लाख ७६ हजार ५१२ रूपैयाँ ७६ पैसा बजेट लागत इष्टिमेटमा पाँचतले ‘ब्लक सी’ भवन निर्माण गर्ने ई–टेन्डरको प्रक्रिया सकिएको छ । केही दिनपछि क्रमिकरूपमा निर्माण कार्य सुरू गर्नेछौँ । त्यसैगरी मानव संसाधनतर्फ आवश्यक जनशक्ति थप गर्दै लगिएको छ । यस वर्ष १७ जना नयाँ शिक्षक, कर्मचारीतर्फ हेभी गाडी चालक १, लेखा शाखामा १ जना कर्मचारी हामीसँग जोडिनुभएको छ । साथै, सुरक्षा गार्डहरू र टेक्निसियनको विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ ।
विद्यार्थीहरूको निमित्त ब्लक बी भवन पछाडि दोश्रो क्यान्टिन निर्माण कार्य चालु रहेको छ । विद्यालय प्राङ्गणमा स्टेसनरी तथा फोटोकपी पसल, ख्वप क्याफे खोल्न पसल कवल भाडामा दिनको निमित्त विज्ञापन गरिएको छ । यस वर्ष ७२ सेट नयाँ डेस्क बेन्च थप बनाइएको जानकारी गराउँदछु । ब्लक ए भवनका झ्यालहरूमा आँखीझ्याल राख्ने निर्णय अनुसार बनाउने कार्य चालु छ । साथै, ब्लक ए को छानोमा झिङ्गटी फेर्ने र रङरोगन गर्ने काम जारी छ । विद्यालय प्राङ्गणको दक्षिणतर्फ पार्किङ्गसहितको बाटो ढलान, बास्केटबल कोर्टको पश्चिमतर्फ सतहमा ब्लक छपाइ, ब्लक ए वरिपरि ह्यूम पाइप बिछ्याउने कार्य र त्यसमाथि बाटो ढलान तथा इँटा जोडाइ कार्य सम्पन्न भएको छ ।
सम्पूर्ण विद्यार्थीको अभिलेख ख्वप एप्समा राखिएको छ । अभिभावक र विद्यार्थीले आवश्यक सूचना र जानकारी त्यसमार्फत लिन सक्नेछन् । लेखा शाखामा हुने भीडलाई मध्यनजर गरी अनलाइन पेमेन्ट र बैङ्कमार्फत पैसा तिर्न सकिने बन्दोबस्त गरिएको छ । यस वर्षको ११ कक्षामा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीको भर्ना तथा प्रवेश परीक्षा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण झन्डै ६ महिना कक्षा १२ र ११ का सम्पूर्ण कक्षा अनलाइनबाट सञ्चालन भएको थियो । हाल सम्पूर्ण मिड टर्म परीक्षा अनलाइनबाट शनिबारका दिन गूगल फर्ममार्फत लिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयका सम्पूर्ण कक्षा कोठा, लबि, प्रशासनिक शाखालगायत विद्यालय प्राङ्गण सी.सी. क्यामराको निगरानीमा रहेको छ ।
कोभिड–१९ का सङ्कटका दिनहरूमा
कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा पनि विद्यार्थीकेन्द्रित रही शैक्षिक क्रियाकलाप जारी राखेका थियौँ। हालसम्म पनि जोखिम कायम रहेकोले हाम्रो सामूहिक प्रयासले कोभिड–१९ माथि विजय प्राप्त गर्न आवश्यक छ । हाम्रा शिक्षक साथीहरू, कर्मचारी मित्रहरू अनि विद्यार्थी भाइबहिनीहरू पनि कोभिड सङ्क्रमणबाट अछुतो रहेनन् । सङ्क्रमित शिक्षक साथीहरूले अनलाइन कक्षालाई घरबाट चालु राख्नुभयो । हामीले विद्यालयका प्रशासनिक कार्यहरू २०७७ जेठदेखि सुरू ग¥यौँ । समग्रमा अनलाइन सिकाइ प्रभावकारी नभएको हाम्रो मूल्याङ्कनबाट देखिएको छ । कक्षा ११ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा र कक्षा १२ को दोश्रो त्रैमासिक परीक्षाले त्यसलाई सिद्ध गर्छ । हाल सम्पूर्ण कक्षाहरू आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कोभिड–१९ सँग जुझ्न सबैतिरबाट सहयोग आह्वान भएबमोजिम सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीबाट ७ दिन बराबरको तलब कटाई कुल ५ लाख ३ हजार ९०४ रूपैयाँ भक्तपुर नगरपालिकाको कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यको लागि खडा गरिएको कोषमा जम्मा गरेका थियौँ । साथीहरूको सल्लाहअनुसार यस वर्ष कुनै पनि पूर्णकालीन शिक्षक कर्मचारीले खाजा र पोशाक भत्ता नलिने निर्णय गरी सोहीअनुरूप सुविधा नलिएको जानकारी गराउँदछु । लकडाउन अवधिमै कक्षा १२ का विद्यार्थीहरूको अभिभावक भेला अनलाइनमार्फत राखी विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाउन अनुरोध गर्दै आगामी शैक्षिक कार्यक्रम र कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षाको विषयमा जानकारी गराएका थियौँ । लामो समयको लकडाउनमा पनि विद्यालयले सदाझैँ शिक्षक–कर्मचारीलाई साविक नियमित तलब उपलब्ध गराएकोे थियो ।
भक्तपुर नगरपालिकाको निर्देशन र अभिभावकहरूको मागलाई ध्यानमा राखी कक्षा ११ र १२ का सबै विद्यार्थीहरूको २०७७ साल साउन र भदौ महिनाको मासिक शुल्क मिनाहा गरिएको छ । त्यसरी मिनाहा गरिएको कुल रकम १ करोड १० लाख १२ हजार ४ सय रूपैयाँ हुन आउँछ । यस वर्ष विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्क पुरानै कायम रहेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्णयअनुसार यस वर्षबाट कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गरेको थियो । कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा विद्यालयमै परीक्षा केन्द्र तोकी सञ्चालन भएकोे थियो । उक्त परीक्षा मर्यादितरूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्देशनअनुसार विद्यालयमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण सकाई नतिजा प्रकाशनको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पठाइयो । परीक्षालाई हाम्रो प्रचलनअनुसार गम्भीरतापूर्वक लियौँ र विद्यार्थीहरूको सही मूल्याङ्कन ग¥यौँ । हाम्रा विद्यार्थीहरूको सिकाइ र प्रतिस्पर्धात्मक अब्बलता नै सही मूल्याङ्कन हो भन्ने हामी ठान्छौँ । यस वर्षको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा निम्नानुसार रहेको छः
यस शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ । त्यसबमोजिम ६ वटा विषयका कक्षाहरू नियमित सञ्चालन भइरहेका छन् । पहिलो÷दोश्रो÷तेश्रो÷अन्तिम त्रैमासिक परीक्षा गरी चार पटक, मध्य त्रैमासिक परीक्षा ३ पटक, ज्यmभ ब्ककष्नलmभलत, हाजिरीलगायत निर्दिष्ट मूल्याङ्कन पद्धति पूर्ववत्रूपमा निरन्तर जारी रहेको छ । यस वर्षबाट त्यसको दायरा बढाउँदै लानेछौँ ।
शैक्षिक वर्ष २०७५÷०७६ मा गरिब तथा जेहेनदार ५५० जना विद्यार्थीहरूलाई ६५ लाख ५५ हजार ६७५ रूपैयाँ छात्रवृत्ति दिइयो । यस शैक्षिक वर्षको लागि छुट्याइएको ६५ लाख रूपैयाँको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रक्रियाहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदछु । २०७७ पुस मसान्तसम्म रू. १५ लाख १ हजार ६ सय २५ सम्बन्धित विद्यार्थीलाई वितरण भइसकेको छ ।
हामीसँग कार्य गर्ने व्यक्ति, सङ्घसंस्थाको अनुभव र लेखा परीक्षणको दौरानमा हामीले उपलब्ध गराउने स्पष्ट र व्यवस्थित हिसाबकिताबको अभिलेखले हाम्रो आर्थिक पारदर्शितालाई झल्काउँछ ।
यस शैक्षिक वर्षमा कोभिडका कारण आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को असारसम्ममा सबै शुल्क उठाउन सकिएन । तसर्थ, कुल बजेट रू. २१ करोड १३ लाख रहेकोमा सञ्चालनतर्फ ११ करोड १२ लाख ५९हजार ५७४ र पुँजीगत खर्चतर्फ ४८ लाख ८४ हजार ४ सय २२ रूपैयाँमात्र प्रगति भयो । त्यसै गरी आम्दानीतर्फ रू.१० करोड १६ लाख ५ हजार ४ सय २२ रूपैयाँप्रगति भयो । विद्यार्थीबाट उठ्न बाँकी शुल्क आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा क्रमिक रूपमा जम्मा भइरहेको जानकारी गराउँछु ।
यस आ.व. २०७७÷०७८ को लागि सञ्चालन खर्च (तलब तथा भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, शैक्षिक सामग्री, जेहेनदार विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिसमेतको लागि) रू. १२ करोड ९४ लाख, पूँजीगत खर्च (पुस्तक, फर्निचर, मेसिनरी सामान, प्रयोगशालासम्बन्धी सामान, भवन निर्माणको लागि) रू. ८ करोड ४० लाख समेत गरी कुल रू. २१ करोड ३४ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । आम्दानीतर्फ १५ करोड १० लाख रूपैया (धरौटी बाहेक) हुने अनुमान गरिएको छ । उल्लेखित बजेटअनुसार २०७७ पुस मसान्तसम्ममा रू. ४ करोड ५ लाख २५ हजार ५ सय ७९ खर्च भइसकेको छ । साथै, विद्यार्थीहरूबाट रू. ९ करोड ३७ लाख २० हजार ६ सय ६१ आम्दानी भइसकेको छ ।
आ.व. २०७६÷०७७ मा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकबाट सामाजिक सुरक्षा कर रू. ३ लाख ८७ हजार ६ सय ४३, पारिश्रमिक आयकर रू. १९ लाख ५६ हजार ७ सय २० रूपैयाँ र विभिन्न बिक्रेताहरूलाई भुक्तानी गर्दा कट्टि गरिएको अग्रीम आयकर रू. ३ लाख १२ हजार ३ सय ७७ समेत जम्मा रू. २७ लाख ५६ हजार ७ सय ४० आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरमा दाखिला भएको छ । स्थानीय शैक्षिक योगदान शुल्कबापत विद्यार्थीहरूको भर्ना समयमा उठाइएको रू. १४ लाख ९६ हजार ३०० रूपैयाँ भक्तपुर नगरपालिकामा दाखिला गरिएको छ ।
शारदा क्याम्पस मा.वि.
हाल शारदा क्याम्पस मा.वि.मा कक्षा ११ र १२ मा गरी ४१ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । यस मा.वि. अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको शिक्षाशास्त्र विषयमा गत सालको तुलनामा यस वर्ष भर्ना सङ्ख्या कमी रहेको छ । भर्ना समयमा कुनै पनि विद्यार्थीसँग कोभिडका कारण प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न नसकिएकोले शिक्षाशास्त्रको महत्वको विषयमा आवश्यक परामर्श र सुझाव दिन सकिएन । आगामी दिनमा विभिन्न विषयहरू थप गर्दै शिक्षाशास्त्रप्रति विद्यार्थीको आकर्षणलाई बढाउँदै लानेछौँ । ख्वप मा.वि. र शारदा क्याम्पस मा.वि. को पठन पाठन एउटै शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ ।
आ.व.२०७६÷०७७ को असार मसान्तसम्म शारदा क्याम्पस मा.वि.को कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च (तलब तथा भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, शैक्षिक सामग्री, जेहेनदार विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिसमेतको लागि) रू. ११ लाख १५ हजार ६ सय ३७ छ र पुँजीगत खर्च रू.२ लाख ८ हजार ९ सय ९९ समेत गरी रू. १३ लाख २४ हजार ६ सय ३६ छ भने आम्दानीतर्फ रू.७ लाख ५२ हजार ७५ रूपैयाँ भई रू.५ लाख ८४ हजार ६१ न्यून रहेको छ ।
यस आ.व.२०७७÷०७८ को लागि चालु खर्च (तलब तथा भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, शैक्षिक सामग्री, जेहेनदार विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिसमेतको लागि) रू. ३२ लाख ३० हजार र पुँजीगत खर्च (पुस्तक, फर्निचर, मेसिनरी सामानको लागि) रू.७ लाख गरी कुल रू. ३९ लाख ३० हजारको बजेट विनियोजन गरिएको छ । आम्दानीतर्फ रू.१६ लाख ७८ रूपैयाँ (धरौटी बाहेक) हुने अनुमान गरिएको छ । उल्लेखित बजेटअनुसार २०७७ पुस मसान्तसम्ममा १ लाख ६७ हजार ९ सय ८४ रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । साथै, विद्यार्थीबाट ३ लाख ९० हजार ५० रूपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
शारदा क्याम्पस मा.वि.बाट आ.व.२०७६÷०७७ मा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक आयकर र विभिन्न बिक्रेताहरूबाट कट्टि गरेको अग्रीम आयकर कुल रू. ८९ हजार ७ सय ४२ आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरमा दाखिला भएको यहाँहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु ।
(ख्वप माविको एक्काइसौँ, ख्वप कलेजको उन्नाइसौँ र शारदा क्याम्पसको तीसौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्राचार्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन)
दिल्ली दङ्गाको एक वर्षपछि पनि पीडितलाई न्याय भएन